I-china MS Plain Wave wocingo mveliso kunye nabathengisi | Ansheng
Isinyithi esinyithiweyo, ekwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni, sisinyithi esisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokwenza umnatha wocingo. Yenziwe ngokukodwa yintsimbi kunye nenani elincinci lekhabhoni. Ukuthandwa kwemveliso kungenxa yexabiso eliphantsi nokusetyenziswa kwayo ngokubanzi.
I-Plain yentsimbi yocingo yomelele yomelele kwaye yomelele. Kumnyama ngombala xa kuthelekiswa ne-aluminium eqaqambileyo okanye i-stainless steel meshes. ayiyikuxhathisa ukubola kwaye iya kuba nomhlwa kwiimeko ezininzi zomoya. Kungenxa yoku, ucingo olucocekileyo ngamanye amaxesha lusetyenziswa njengokhetho olunokulahlwa.
Sebenzisa: umnatha wensimbi ocacileyo ubukhulu becala usetyenziselwa ukuhluza irabha, iplastiki, ipetroleum kunye nomzi mveliso weenkozo. Iikontraki ngokubanzi zisebenzisa umnatha: iipaneli zokufaka, iiwindow, ii-shaker screens, iidonga zokugquma, kunye nekhabhathi. Abavelisi bemoto basebenzisa i-mesh yentsimbi ecacileyo ye-grill kunye nezikhuselo ze-radiator, izihluzi zeoyile kunye neefilitha zokuhluza. Icandelo lezolimo lisebenzisa umnatha wensimbi ocacileyo koomatshini nezixhobo zoonogada kunye nokwahlulahlula kunye nokuhluza.
Uhlobo olukiweyo: I-Plain Weave kunye ne-Dutch Weave kunye ne-herringbone weave.
Egqithileyo Stainless wocingo
Okulandelayo: Isefu olukiweyo wocingo
Umnxeba wocingo aluka umnatha webhetri